Teemu Pukki Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Teemu Pukki Childhood Story Plus Nkọwapụta Untold Biography Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye aha ya bụ “Pukki“. Anyị Teemu Pukki Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Akụkọ Teemu Pukkis nke Childhoodmụaka- Nyocha rue ụbọchị.
Nyocha a gụnyere ndụ nwata ya, ndabere ezinụlọ ya, ndụ ọrụ mmalite ya, ụzọ ya maka akụkọ ama ama, ịrị elu ya na akụkọ ama ama, mmekọrịta, ndụ onwe onye, ​​ndụ ezinụlọ, ụdị ndụ ya, wdg.
Ee, onye ọ bụla na -ahụ ya dị ka onye ọkpọ ahụ nwere ọmarịcha nka nke maara ka esi achọta azụ azụ.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na -atụle akụkọ ndụ Teemu Pukki nke bụ ihe na -atọ ụtọ. Ugbu a n'atụghị egwu, ka anyị bido.
Akụkọ banyere emumụaka nke Teemu Pukki - Ndụ Mmalite na Ezinụlọ:
Malite, aha ya bụ Teemu Eino Antero Pukki. Pukki, dịka amara ya ma ọ bụ kpọọ ya, amụrụ ya na ụbọchị 29th nke Mach 1990 nye nne ya, Teija Pukki, na nna, Tero Pukki na ndịda mpaghara Kymenlaakso na Ọwara Oké Osimiri Finland.
A zụlitere Pukki na Hovinsaari, Kotka. Ọ bụ obodo ọdụ ụgbọ mmiri na Ọwara Oké Osimiri Finland mara maka ogige ntụrụndụ eke ya na ebe akụkọ ihe mere eme.
Obodo Kotka nke a sere n'okpuru dị ka amaara dị ka otu n'ime mpaghara mbụ mepere emepe nke Finland mara maka akwụkwọ mpempe akwụkwọ ya.
Teemu Pukki Mmalite na Homelọ.
Teemu Pukki etoliteghị naanị ya, mana ya na ụmụnne ya abụọ ndị ọzọ nyere aka na -enye aka na obi ụtọ nwata.
A kọwara ebe nchekwa nwata kachasị mkpa Teemu Pukki site na foto dị n'okpuru.
Ndụ Teemu Pukki.
Nkụzi Teemu Pukki na Nrụpụta Ọrụ:
Ezi nzụlite ụlọ na agụmakwụkwọ nwata bụ aka dị mkpa na mmepe ya dịka nwata.
Pukki, n'adịghị ka ụmụnne ya ndị nwanyị, ọ bụghị naanị nwee ụdị a siri ike maka parrots kama zụlite omume ịgba bọọlụ.
Teemu Pukki ya na ụmụnne ya.
Inwe nne ma ọ bụ nna na-ahụ n'anya football nyekwara aka n'ịhọrọ bọọlụ dịka ihe ntụrụndụ ya. Omume na -aga n'ihu mere ka ọ dịrị njikere ịbịaru ụlọ akwụkwọ egwuregwu football.
Mgbe ọ bi na Hovinsaari na Kotka, Pukki nwetara ohere maka ule bọọlụ na klọb obodo ya aha ya bụ HOPS (Hovinsaaren Palloseura).
Akụkọ ndụ Teemu Pukki - Ndụ Ndụ Ndụ:
Pukki malitere ọrụ football ya na HOPS (Hovinsaaren Palloseura) mgbe ọ gafesịrị ule ya na agba na -efe efe. Klọb ahụ nyere ya ntọala bọọlụ dị mkpa ma meghere ya ụzọ ịbanye na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ buru ibu.
Mgbe Pukki tolitere dị ka onye ntorobịa, ọ sonyeere klọb obodo obodo ya, KTP klọb nke nyere ya ohere igwu egwu ha.
Ọ mere mpụta izizi dị egwu maka ndị otu mbụ mgbe ọ dị afọ 16. Nnukwu mpụta mbụ a hụrụ ya ka ọ na -akpọ oku maka ndị ntorobịa mba Finland.
Teemu Pukki Bio - Okporo Ụzọ Akụkọ Ama:
N'ime oge egwuregwu bọọlụ nke mbụ ya na ndị klọb, Pukki nwetara oku ka ọ hapụ Finland wee sonyere Sevilla Atlético, otu egwuregwu bọọlụ Spanish nke dị na Seville.
Ka ọ malitere akara ihe mgbaru ọsọ, Pukki chere na ọ dị ya mkpa ịkwaga maka klọb ama ama. Sevilla nwetara ya n'ọrụ ebe ọ nwere mmalite mmalite nke ịgba bọọlụ nke mbụ. Nke a kpaliri ya ịlaghachi n'ala nna ya, Finland.
Na 28 August 2010, Pukki bịanyere aka na klọb ịgba akwụkwọ afọ atọ na ọkara HJK. N'ụlọ ọgbakọ dị na Finland, ọ malitere ịtụ ihe mgbaru ọsọ ọzọ.
Agbanyeghị na afọ ejughi ya n'ihi na ihe mgbaru ọsọ nwere ike ime naanị na Finland yana asọmpi asọmpi na -adịchaghị. Pukki kpebiri ka edepụta aha ya maka mbufe iji malite njem n'otu n'ime ọgbakọ kacha elu na Europe.
Pukki tachiri obi njem siri ike site na Celtic (Scottland) na Schalke 04 (Germany), na-enweghị olileanya nke iwepụta ike mgbaru ọsọ ya maka klọb ndị mba ọzọ.
Akụkọ ndụ Teemu Pukki - Bilie na Akụkọ Ama:
The Danish :ga nke Ọma: Na 1 Septemba 2014, Pukki bịanyere aka na nkwekọrịta Danish otu Brøndby-IF. N'ụlọ ọgbakọ, chi bọọlụ zara ya wee malite izo mmiri ozuzo megide mmegide ya.
Ndị na -akwado klọb nwere obi ụtọ na ya nke na ha mepụtara ọkọlọtọ na -agụ "Enweghi Pukki No Party”Dị ka ụzọ isi chọọ ka kpakpando ha na -egwu n'egwuregwu ọ bụla.
Iguzosi Ike n'Ihe Nye Teemu Pukki n'okwu ha - Enweghị Pukki No Party.
Pukki gwụchara oge mbụ ya dị ka onye kachasị nye klọb bọọlụ. Mgbe ọ nọrọ oge abụọ, klọb ahụ chọrọ ka ọ megharịa nkwekọrịta ya mana ọ jụrụ, na -ekwusi ike na ọ chọrọ ịchọta ebe ahịhịa na -acha akwụkwọ ndụ na bọọlụ Bekee.
Nke a kpasuru klọb ahụ iwe na -eduga na mwepụta ya na njedebe nke oge 2017 - 18.
Na 30 June 2018, Pukki sonyeere Asọmpi Bekee club Obodo Norwich ebe ọ gara n’ihu na-emekpa ndị na-agbachitere ya na iwere ihe mgbaru ọsọ, otu nke butere klọb inweta nkwalite ọkwa ụlọ ọrụ Bekee.
Teemu Pukki Bilie na Akụkọ Ochie na English Football.
N'April 2019, enwetara Pukki onye ọkpụkpọ asọmpi EFL nke Oge. E tinyekwara ya na 2018 - 19 Team Team nke Oge.
Ọ kwụsịghị ebe ahụ, ndị na -akwado Norwich City bụkwa ndị mere ka ọ nata Barry Butler Memorial Trophy kpọkwara Pukki Norwich City FC Player nke Oge.
Pukki malitere imebi ihe ndekọ ozugbo o banyere na Premier League. Ị maara?… Ọ gbara otu okpu-agha nanị ụbọchị asatọ ka mmalite Premier League bidoro, na-eji nke ahụ ekwupụta na nrọ ihe mgbaru ọsọ ya emezuola. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Akụkọ ịhụnanya Teemu Pukki na Kirsikka Laurikko:
Site na mmụba ya na ama dị ka a hụrụ na ndekọ okpu ya atọ malitere na oge nke Premier League nke 2018-2019, o doro anya na ọ ga-abụrịrị na ọtụtụ ndị na-eguzosi ike n'ihe nye ya jụrụ ajụjụ banyere ndụ onwe ya na-akpali ajụjụ a; Onye bụ enyi nwanyị Temmu Pukki, onye bụ nwunye nwunye Temmu Pukki?.
N'azụ onye otu egwuregwu bọọlụ na-aga nke ọma bụ WAG mara mma nke ukwuu WAG onye na-akpọ aha Kirsikka Laurikko.
Nwanyị nọ n’azụ Teemu Pukkis Ndụ.
Na-ekpe ikpe site na post mgbasa ozi ha na-elekọta mmadụ, ọ dị ka Pukki na Kirsikka kegidere eriri ahụ na June 2019 na ihe yiri ememe emechiri ma ọ bụ nke nzuzo.
Alụmdi na Nwunye Teemu Pukkis.
Tupu alụm di na nwunye ha, kpomkwem na December 2017, onye otu ọhụrụ n’ime ezinụlọ Pukki bịarutere n’ihe mere bụrụ nnukwu ọ joyụ nke nne na nna.
Teemu Pukkis na nwunye ya nabatara nwa ọhụrụ.
Ngwa ngwa gaa 2019, a hụrụ na obere nwa ahụ ka ọ na-eto n’ike ọsọ. Ndị nne na nna a na-eji onwe ha eme ọnụ na-emekọ ọnụ obi ụtọ ọnụ.
Teemu Pukkis na-egosi nwunye ya na nwa ya ndị Fans.
Ndụ nke Onwe Teemu Pukki:
Tomata ụdị ndụ Teemu Pukki ga - enyere gị aka ịmata onye ọ bụla nọ n’egwuregwu.
Na mpụga football, Pukki nwere ihe jikọrọ ya na Lionel Messi. Ya na anụ ụlọ ya nwere njikọ siri ike.
Agbanyeghị na enwere okwu na enweghị ntụkwasị obi ma ọ bụ obere fọdụrụ na egwuregwu ọgbara ọhụrụ, n'ezie, ọ naghị eburu n'uche mmekọrịta dị n'etiti Pukki na nkịta ya.
Teemu Pukki, na-egosi ụfọdụ ihe atụ maka Nkịta ya.
Ndụ Teemu Pukki:
Ikpebi n'etiti ịdị na-egwu egwuregwu na inwe ihe ụtọ abụghị ugbu a nhọrọ siri ike maka Teemu Pukki. Achịkọtara nkwupụta a na foto dị n'okpuru.
Ihe Teemu Pukki na-emefu ego ya.
N'ileba anya na profaịlụ mgbasa ozi mmekọrịta ya, Teemu Pukki abụghị onye a hụrụ ka ọ na -ebi ndụ mara mma ma ọ bụ nke okomoko.
Ọ mara ezigbo mma na ijikwa ego bọọlụ ya, ọ naghị emefu ego dị ka onye nzuzu ma ọ bụ gbanwee ụdị ndụ ya.
Ndụ ezinụlọ nke Teemu Pukki:
Amaghi ihe banyere ndi ezinulo Teemu Pukki. Ndị mụrụ ya bụ Tero na Teija dị ugbu a na-ebi ndụ onwe na obere ala n'agbanyeghị ọtụtụ ụzọ iji jikọọ na soshal midia.
Teemu Pukki debere ya otu a ọ bụghị naanị maka nne na nna ya, kamakwa ụmụnne ya ndị nwanyị na ndị ikwu. Dị ka n'oge edere, mgbasa ozi yiri ka ọ na -elekwasị anya naanị na ya, nwunye ya mara mma, na nwa ya nwanyị.
Ndụ ezinụlọ nke Teemu Pukki.
Nraranye Teemu Pukki n'ịhụ na nwunye ya, nwa ya, na ezinụlọ ya niile nwere ntụsara ahụ yiri nkwa ọ na -enye n'egwuregwu ahụ.
Teemu Pukki Eziokwu Eziokwu:
Ndi kwanyere ugwu na ihe ndia: Dị ka anyị, Ọtụtụ ndị na-agba bọọlụ hụrụ na ha maara Teemu Pukki obere oge ka ọ nwesịrị ndekọ okpu okpu.
Agbanyeghị, ndị egwu amaghị ihe gbasara ọtụtụ nsọpụrụ ya dịka mmadụ na ndị otu ya gara aga. Chọta n'okpuru ihe ewepụtara na Wikipedia.
Teemu Pukki Nkwanye ugwu na Ndekọ.
Onye Na-ekiri Egwuregwu: Pukki bụ onye egwuregwu na-anaghị eji egwu egwu egwu egwu ma ọ naghị arapara na FIFA n'agbanyeghị na ọ bụ ndị ịgba ọsọ.
Teemu Pukki na-ele ndị enyi ya egwu egwuregwu egwuregwu.
N'agbanyeghị ịbụ onye na-agba bọl ụkwụ nke a na-atụ anya na ọ ga-ahụ EA Gaming usoro FIFA, Pukki rapara na NFL (National Football League).
Emuhụnanya Teemu Pukki maka Egwuregwu.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Teemu Pukki Childhood Story ya na akụkọ gbasara Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.